कपिलवस्तुमा आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको मृत्यु – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कपिलवस्तुमा आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको मृत्यु
कपिलवस्तुमा आइसोलेसनमा रहेका बिरामीको मृत्यु
कपिलवस्तु अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा रहेका एक बिरामीको सोमबार राती मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा विजयनगर गाउँपालिका वडा नं. २ का ३० वर्षीय गोवर्धन भर रहेको अस्पतालले जनाएको छ । मृतक भरलाई कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएपछि ३ दिनदेखि आइसोलेसन वार्डमा राखी उपचार गरिँदै आएको थियो ।
मृतक भर क्षयरोगको बिरामीसमेत थिए । क्षय रोगको लामो बिरामी, निमोनिया र फोक्सोमा समस्याका कारण उनको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । उनको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको रिर्पोटमा कोरोना भाइरस नेगेटिभ रहेको अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. किशोर बन्जाडेले बताए ।
मृतक भरले विगत ३-४ वर्षदेखि क्षय रोगको औषधि सेवन गर्दै आएका थिए ।
पटक-पटक बिरामी हुने गरेका भरलाई पछिल्लो पटक अधिक ज्वरो आएपछि बहादुरगंज स्थित शिवराज अस्पतालमा उपचार गरी थप उचारका लागि चन्द्रौटा स्थित निजी स्वास्थ्य संस्थामा लगिएको थियो । चन्द्रौटामा भरलाई अधिक ज्वरोसहित कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिएपछि कपिलवस्तु अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखी उपचार थालिएको थियो । आइसोलेसन वार्डमा उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो ।
मृतक भरको परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । परिवारमा काजक्रिया गर्ने सम्मको पैसा नभएको मृतक भरकी पत्नी चम्पा भरले बताइन् । मृतक भरको शवलाई घरसम्म पुर्‍याउनका लागि एम्बुलेन्स वा शव वाहनको भाडासम्म तिर्ने पैसा नभएपछि आफन्तजनले गाउँकै एक टेम्पु खोजेर शव घरसम्म पुर्‍याएका छन् । आफूसँग भएको ४-५ हजार रुपैयाँ श्रीमान्को औषधी उपचारमै सकियो, मृतक भरकी पत्नी चम्पाले भनिन्, ‘पतिको मृत्यु भइहाल्यो अब काज क्रिया कसरी गर्ने ? परिवार कसरी पाल्ने ? त्यो मेरो लागि ठूलो समस्या भयो